I-Oil Free Fryer ▷ Imibono kanye nama-Air Fryers Angcono Kakhulu ka-2022
Amafutha Mahhala Fryer
I-Philips Airfryer XL
I-Philips Airfryer HD9621/90
I-Tefal Fry Delight
I-Actifry Express Snacking
I-Turbo Cecofry 4D
ICecofry Compact Rapid
I-Cecofry Compact Plus
Inkosazana Aerofryer XL
I-Moulinex Easy Fry
I-Oil Free Fryer: Imibono nokuthi Iyiphi Ongayithenga
Ingabe ufuna ukuthuthukisa indlela odla ngayo ngaphandle kokuyeka ukudla okuthosiwe okuthandayo? Izithoshi zomoya oshisayo ziyinketho enhle futhi usanda kungena kuwebhu eyireferensi emayelana nazo.
Ungaphuthelwa iziqondiso zethu ezinamamodeli amahle kakhulu, siyakutshela ukuthi zisebenza kanjani, imibono yalabo asebevele bezamile nokuthi bangazithenga kuphi. amanani amahle kakhulu inthanethi eSpain.
Yiziphi ezihamba phambili njengamanje?
AmaFryers Aqhathanisayo Angenawo Amafutha
Ungakhetha kanjani nokuthi yini okufanele uyibheke?
Isebenza Kanjani IFryer Yamahhala?
I-Hot Air Fryers Price
Sekuyiminyaka embalwa manje besemakethe, kodwa basebaningi abantu abanokungabaza ngalo mshini omncane. Uma ulapha, kungenxa yokuthi unesithakazelo kubo, kodwa awunaso isiqiniseko banikeza muphi umphumela futhi uma kuwufanele futhi zilungele ikhaya lakho. Qhubeka ufunda futhi thola ulwazi oluphelele kakhulu nokungakhethi
Sithanda ukuthuthukisa nokwazi ukuthi sikusizile yini, ngakho-ke noma yikuphi ukuphawula kwamukelekile, noma ngabe kubucayi, sinikeze umzuzu 🙂
➤ Ukuqhathaniswa KwamaFryer Angenawo Uwoyela Angcono Kakhulu
Qhathanisa ngokushesha futhi kalula ukuze ubone umehluko obaluleke kakhulu futhi unqume ukuthi yimuphi ifaneleka kangcono izidingo zekhaya lakho.
I-Actifry 2 ku-1 XL
I-Cecofry Deluxe Rapid
2 Izindawo Zokupheka
➤ Isiphi Isithosi Esingcono Kakhulu Esingenawo Uwoyela Emakethe?
Ukunquma ukuthi yikuphi okungcono kakhulu akukhona kithi, kusukela umsebenzisi ngamunye unokubalulekile ezinquma ukukhetha.
Esingakutshela kona ukuthi amamodeli agqama ngaphezu kwamanye, ngokusebenza kwawo, ngezindleko zawo eziphansi noma ngokuba nenani elingcono kakhulu lemali.
Sizobona kuqala izici ezibaluleke kakhulu yamadivayisi angcono kakhulu emakethe nangaphansi kokukhetha nge amanye amamodeli afakiwe.
▷ I-Philips Airfryer HD9280/90
6.070Izibuyekezo ezingu- XNUMX
Intengo Philips HD9220/20
I-XL air fryer yomndeni: enesitsha esingu-6,2 l nobhasikidi omkhulu ongu-1,2 kg wezingxenye ezifika kwezi-5 - izinhlelo zokupheka ezi-7 esethiwe ngaphambilini ezinesikrini sokuthinta
Indlela enempilo yokupheka: ukudla okumnandi nokunomsoco okunamafutha afika kwangu-90% aphansi - Fry, bhaka, ugrise, ugazise futhi uphinde ukushise nomholi womhlaba wonke kwizithonjana zomoya**
Amaresiphi Enziwe Ngokwakho: Landa uhlelo lwethu lokusebenza lwe-NutriU ukuze uthole izindlela zokupheka ezikhuthazayo zokuphila okunempilo ezihambisana nalokho okuthandayo - Zilandele isinyathelo ngesinyathelo kalula
I-crispy ngaphandle, ithenda ngaphakathi: Ubuchwepheshe be-Rapid Air obunomklamo omise okwenkanyezi oyingqayizivele budala ukuzungeza komoya oshisayo osezingeni eliphezulu ukuze uthole ukudla okumnandi oku-crispy nokuthambile.
Ukuhlanza okungenamsebenzi: Ifriji enezingxenye ezikhishwayo zomshini wokuwasha izitsha
✅ Izici ze-Airfryer ezifakiwe
Amandla wama-6.2 amalitha
Amandla angu-2000 W
I-Rapid Air Technology
Isikhathi se-Analog nokulawula izinga lokushisa
Izingxenye zokuphepha zomshini wokuwasha izitsha
Impendulo Enhle Evela Kubathengi
Ibhrendi eyaziwayo nenolwazi
Nakuba kunamamodeli amaningana athengisa kahle kakhulu, omunye wabaholi bokuthengisa emikhiqizo eyaziwayo yi IPhilips HD9280 / 90 emndenini wakwa-Airfryer.
Lo mshini, ngaphezu kokucaciswa okujwayelekile kwalezi zinto zikagesi, unawo Ubuchwepheshe be-Rapid Air. Ubuchwepheshe be-philips obunelungelo lobunikazi obudizayinelwe ukuthola ukudla okuzophekwa ngokulinganayo namafutha amancane kakhulu.
1.716Izibuyekezo ezingu- XNUMX
I-Tefal Actifry 2 enanini elingu-1
I-fryer ekhethekile engu-2-in-1 Izindawo ezimbili zokupheka ukulungisa ukudla konke ngesikhathi esisodwa; ihlanganisa ipuleti le-grill eyengeziwe ngqo emkhiqizweni
Ukujikeleza komoya oshisayo onengalo ejikelezayo ye-stirrer Ukupheka ukudla okuthosiwe ngokuzenzakalelayo ngokulawula izinga lokushisa, kwenza ukuthosa okunamafutha aphansi; izinga lokushisa elilungisekayo lemiphumela yokupheka enembayo 80 kuya ku-220° C
9 izinhlelo ezizenzakalelayo ngqo esikrinini nge touch surface enkulu; ukubambezeleka ukuqala kuze kufike emahoreni angu-9 futhi ugcine umsebenzi ofudumele
Ukumisa okuzenzakalelayo lapho uvula isivalo, zonke izingxenye (isitsha se-ActiFry, i-grill, isivalo) ziyasuswa futhi umshini wokugeza izitsha uphephile; isibali sikhathi esinethoni yesignali
Yini esebhokisini Tefal YV9708 ActiFry Genius XL 2in1, indishi ekhiphekayo nepuleti legrill, isivalo esikhiphekayo, isipuni sokulinganisa, imanuwali yomsebenzisi
✅ Izithombe ezinhle kakhulu ze-Tefal Actifry
Umthamo omkhulu we-1.5 Kg: 4/5 Amaseva
Amandla angu-1400 W
Izindawo Zokupheka Ezimbili
I-Digital Programmer ene-LCD
4 Amamenyu Ngekhanda
Ilungiseka iminyaka engu-10
Okwamanje i-air fryer nge izindawo ezimbili zokupheka edayiswa kakhulu yi- I-Tefal Actifry 2 ku-1. Esinye sezici ezigqama kakhulu kulo modeli ukuthi kungenzeka ukupheka ukudla okubili ngesikhathi esisodwa.
Iphinde ifake i- i-scoop ejikelezayo esusa ukudla ngokuzenzakalelayo futhi ugwema ukukwenza ngesandla. Intengo yayo ithi iphezulu, nakuba ngokuvamile inezaphulelo ezinhle.
▷ I-Cecotec Turbo Cecofry 4D
98Izibuyekezo ezingu- XNUMX
Cecofry 4D intengo
I-Dietetic fryer emisha enesistimu yokupheka evumela ukupheka kusuka phezulu, ukusuka phansi noma ngesikhathi esisodwa ukusuka phezulu nangaphansi, kuzungeze ukudla okungu-360º nokusabalalisa ukushisa ngokulinganayo.
I-automatic fryer epheka kungenawo amafutha amaningi anezinhlelo ezingu-8 esethiwe ukuze kube lula ukuzisebenzisa futhi ziqonde: sauté, toast, french fries, oven, manual, frying pan, rice ne-yogurt. Ihlanganisa ifosholo ukuze uzinyakazise ngokuzenzakalelayo ongapheka ngalo ngomzamo omncane nesibambo, kokubili esikhiphekayo.
Idigri yezinga lokushisa elilungisekayo ngedigri ukusuka ku-100 ukuya ku-240º ngesibali sikhathi esisebenza kusuka kumaminithi angu-5 ukuya kwangu-90 ukupheka zonke izindlela zokupheka ezingaba khona. Ihlanganisa imenyu ukuze ukwazi ukupheka iyogathi ezingeni lokushisa esethiwe elingu-60ºC, elilungisekayo ukusuka kumaminithi angu-0 ukuya emahoreni angu-16.
Inenketho yokukwazi ukupheka izitsha ezimbili ngesikhathi esifanayo emazingeni amabili ngenxa yegridi, ekwazi ukuhlanganisa amalungiselelo amaningana ngesikhathi esisodwa, okwenza isikhathi esiningi. Inesitsha somthamo we-3-litre esine-ceramic yamatshe enezingqimba ezintathu engapheka kufika ku-3,5 kg. lamazambane, ukuvimbela ukudla ukuthi kunamathele phansi.
Kuhlanganisa imanyuwali kanye nencwadi yeresiphi ukuze ukwazi ukupheka izitsha ezahlukene ngendlela elula ngezindlela zokupheka ezingu-40 ukuze ufunde ukupheka ngale nsizakalo yenguquko kanye nezindlela zokupheka eziyi-8 ezengeziwe zevidiyo ukuze ubone ngefomethi yevidiyo ukuthi kulula kangakanani ukupheka ngalokhu kudla. imodeli ye-fryer. Inamandla angu-1350 W ukupheka noma yisiphi isidlo kahle. Izilinganiso ze-fryer yilezi: 31 x 39 x (47 cm ngesibambo) x 23 cm.
Cecotec Store Buka isivumelwano
✅ I-Cecofry 4D Highlights
Amandla angu-1350 W
Izindawo Zokushisa Ezimbili Ezizimele
Ikhishi kumazinga angu-2
I-Rotary Shovel Engasuswa
8 Izinhlelo Ezisethiwe
Inkampani yaseSpain i-Cecotec imaketha isithombo somoya oshisayo ephelele kakhulu futhi eguquguqukayo emakethe Kuze kube manje. Ikhono layo loku pheka ukudla okubili ngesikhathi esisodwa, ifosholo lakho elijikelezayo esikhiphekayo ukuxova ukudla futhi ephelele yayo isilawuli sedijithali.
Kodwa akugcini lapho, the I-Turbo Cecofry 4D yiyo yodwa inama-heat-emitters amabili, eyodwa ephansi nengaphezulu, ezizimele futhi zingenziwa zisebenze ndawonye noma ngokwehlukana.
▷ I-Princess Froer engenawoyela
Intengo ye-Aerofryer XL
✅ Izithombe ezinhle kakhulu ze-Aerofryer
Amandla 3.2 Amalitha: 4/5 Amaseva
I-Digital Control enezinhlelo ezihlukahlukene
Uma ufuna imodeli nge inani elihle lemali kufanele ucabangele lesi fryer esinempilo. Intengo yayo evamile yokuthengisa ingama-euro ayi-125 kodwa ngokuvamile babe nezaphulelo lokho kubeke cishe ama-euro angama-90. Kunezinguqulo ezimbili zedivayisi ezinomehluko omncane ongawubona ekuhlaziyeni esikwenzile kuwebhu.
Kuyidivayisi enezincazelo ezinhle ezijwayelekile uthole ukwamukelwa okukhulu phakathi kwabathengi, abanikeza nokuhlola okuhle. Umthamo wayo ongaphezu kwesilinganiso, amandla kanye nawo izilawuli zedijithali ngezinhlelo ezahlukahlukene.
Uma ukhetha ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuhlanza, ngoba ilungele ukuwasha emshinini wokuwasha izitsha. Njengoba ubona, ayintuli lutho, futhi kanye nemibono emihle yabasebenzisi iyenza ime phakathi kwamamodeli anentengo engcono kakhulu yekhwalithi.
Ifriji yekhishi enempilo enezindlela zokupheka ezingu-4: gazinga, u-grill, u-roast, ubhake kanye ne-gratin; nciphisa amafutha namafutha ekudleni kwakho
Umthamo we-800 gr ulungele abantu abathathu noma abane kuze kufike ku-3 g wamafrimu afriziwe enziwe ngemizuzu eyi-4 ngo-500 C kufaka phakathi isikhathi sokushisa.
Kulula ukuyisebenzisa imizuzu engama-30 isibali sikhathi esilungisekayo
Ukuthosa okunempilo usebenzisa amafutha amancane noma awakho nhlobo lapho uthosa, uzopheka izitsha ezinempilo nezimnandi
Jabulela ukudla kwakho okuthosiwe okunempilo ngaphandle kokugcwalisa indlu ngephunga
✅ Izici ezifakiwe Fry Delight
800 Grs Amandla: 2/3 Izinkonzo
Umkhiqizo Olungisekayo iminyaka eyi-10
Le fryer enempilo ingelinye lamamodeli akhona phakathi kwenani elingcono kakhulu lemali. I-pvp yayo iseduze nama-euro angu-150 kodwa okuvame kakhulu ukuthi inesaphulelo esikhulu futhi cishe i-100 euros.
Kuyidivayisi elinganiselayo enemininingwane eyanele yokwenza umsebenzi wayo ngokuphelele futhi kuzuzwe ukwaneliseka kwabathengi bakho. Into ephawuleka kakhulu yayo ukusetshenziswa kalula, umklamo wakho nokuthi kuyini eyakhelwe ukuhlala kanye nokukwazi ukulungiswa uma kwenzeka ukuphuka.
▷ I-Cecotec Cecofry Compact Rapid
4.001Izibuyekezo ezingu- XNUMX
Fryer Amanani I-Compact Rapid
I-Dietary fryer evumela ukupheka ngesipuni esisodwa samafutha, ukufeza imiphumela enempilo. Imiphumela emihle kakhulu kuzo zonke izindlela zokupheka ngenxa yobuchwepheshe bomoya oshisayo we-PerfectCook.
Kufaka ubhasikidi. Pheka kufika ku-400 amagremu amazambane ngesikhathi esisodwa. Iyahleleka ngesikhathi kanye nezinga lokushisa.
Ine-thermostat efika ku-200 ºC. Isikhathi esilungisekayo sisuka kumaminithi angu-0 kuye kwangama-30.
1,5 litre umthamo wesitsha.
Kuhlanganisa nencwadi yokupheka ephelele.
✅ Amaphuzu Avelele Asheshayo
1.5 litre umthamo: 2 servings ubuningi
Amandla angu-900 W
I-Thermostat ye-analog nesibali sikhathi
Mhlawumbe ku-aliexpress uzothola eshibhile, kodwa uma ufuna sebenzisa imali encane Ku-Air Fryer sincoma ukuthi Cecofry Compact Rapid by Cecotec. Ngokuqinisekile ngeke ulondoloze okuningi ngokukhetha i-china futhi kule modeli ye Inkampani yaseSpain unewaranti yeminyaka emibili.
Nakuba uhlobo lumemezela i-RRP elinganiselwa kuma-euro angu-75, ngokuvamile luba nezaphulelo ezilubekayo cishe ama-euro ayi-40. Ngale ntengo azikho izaba uma ufuna ukupheka cishe nowoyela bese uzama ubuchwepheshe bomoya oshisayo.
▷ Yimaphi amabhrendi angcono kakhulu?
Okwamanje lezi izinhlobo ezine ezihamba phambili kumaFryers anamafutha amancane kukhathalogi yawo ebanzi kanye nokuba ne amamodeli athengiswa kakhulu eSpain.
Uma ufuna ukubona amadivayisi abo angcono kakhulu kanye nezithombe ezinhle kakhulu zenkampani ngayinye chofoza esithombeni.
I-Philips Airfryer Oil Free Fryers
I-Tristar Oil Free Fryer
I-Tefal Oil Free Fryers
➤ Ezinye Izithonjana Zomoya Ezishisayo Ezifakiwe
Finyelela kuzibuyekezo zethu, kuzo sihlaziya amanye amamodeli ngokuningiliziwe etholakala emakethe yaseSpain.
Uzothola i izinzuzo kanye nokubi, imibono yabasebenzisi asebepheke nabo futhi ungathenga kuphi eyakho ngentengo engcono kakhulu.
I-Vpcok Amafutha Yamahhala
I-Moulinex Easy Fry Deluxe EZ401D AmaFryer Amahhala Amafutha
I-Lidl Oil Free Fryer
I-Cosori Oil Free Fryers
I-Fryer Diet Fryer
I-Aicok Oil Free Fryer
Iyini i-oyili engenawoyela
Isiphenduke enye yezinto zikagesi zasekhaya eziyimpumelelo. Ngoba Bangakwazi ukulungiselela zonke izinhlobo zokupheka, kungaba izifundo zokuqala noma zesibili nama-dessert, kodwa ngaphandle kwamafutha noma ngesipuni sawo nje. çLokhu kungenxa yokuthi beza nobuchwepheshe obusha obuhlanganisiwe, obususelwe ekutheni kuzoba wumoya ozungeza ngezinga lokushisa eliphezulu nangesivinini esikhulu. Lokhu kwenza ukudla kube nesiphetho esihle esikwaziyo, kodwa ngaphandle kokwengeza inani eliphezulu lamafutha.
➤ Iyiphi Ifriji Yamahhala Ongayithenga?
Isincomo sethu ukuthenga ama-Brand anikeza i-Technical Service e-Spain, njenge-Tefal, i-Philips, i-Princess, i-Cecotec ... Khumbula ukuthi avaliwe futhi amadivaysi ahlangene angaphansi kwamazinga okushisa aphezulu futhi ahlupheka kakhulu, ngakho-ke uzokujabulela ukuba nendawo ukuyilungisa noma ukuthi ungathenga kuphi izingxenye ezisele uma uzidinga. Nge-boom, kuphume izinhlobo eziningi ezimhlophe ezingenayo i-SAT futhi umehluko wamanani ngamanye ama-Brand Models awukho kangako.
▷ Iyiphi ongakhetha? Izici ezibalulekile
Izici ezibaluleke kakhulu Izinto okufanele uzikhumbule lapho ukhetha i-air fryer yilezi:
Amamodeli amancane ayathengiswa, alungele imibhangqwana noma abangashadile, namamodeli amakhulu omndeni wonke, ngakho-ke kufanele ukucabangele lokho futhi khetha umthamo ofanelana nezidingo zakho.
Kungcono ukuthenga i-fryer enamandla ngaphambi kokuwa, njengoba kuyinto engenza umehluko kuyo izinga kanye nezikhathi zokupheka. Kunoma yikuphi, amandla aphakeme akusona isibonakaliso sokuthi asebenza kangcono, ngoba kuncike endleleni idivayisi esebenzisa ngayo lawo mandla.
✅ Ukuhlanza okulula
Kwenze kube lula ukuwasha Kuyinto ebaluleke kakhulu kunalokho ongase ukucabange ekuqaleni, uma ukuhlanza kunzima futhi kuyinkimbinkimbi ungase ungakusebenzisi ukugwema ukubola.
Intengo ivamise ukuba yisici okufanele sinakwe kunoma yikuphi ukuthenga, ngenhlanhla unazo zonke izintengo, ngisho nakuma-brand best.
✅ Ukubuyekezwa kwabathengi
Indlela enhle yokuthola ukuthenga kwakho ngokufanele ukufunda imibono yabathengi asebevele bayizamile. Zama ukufunda ukubuyekezwa kanye ungabheki nje amaphuzu, bathambekele ekuboniseni kangcono iqiniso.
✅ Ezinye Izici Ezibalulekile
Nakuba izici ezingenhla ziyizisekelo ezibaluleke kakhulu, kunezici ezimbalwa ezingathuthuka kakhulu ulwazi lomsebenzisi nemiphumela yokupheka.
Amazinga Ahlukahlukene Wokupheka
I-Rotating Scoop Yokususwa Kokudla
Setha ngaphambilini Amamenyu
Izindawo Zokushisa Ezihlukahlukene
Izinzuzo zamafriji angenawo uwoyela
Uma sesishilo ukuthi kuwumbono ongaphezu kokuphumelela, manje kufanele sazi ukuthi yiziphi izinzuzo zayo eziyinhloko, okuzoba yizo ezizogcina zisinqobile:
Izitsha ezinempilo kakhulu: Kuyiqiniso ukuthi ngezinye izikhathi, ngenxa yejubane lempilo esinayo, asimi ukuze sidle ukudla okunomsoco. Lokhu kubangela ukuba sidle ngokushesha futhi kabi, sithathe ingxenye enkulu yamafutha emzimbeni wethu, azoguqulwa abe ama-calories. Ngakho-ke, i-fryer engenawo amafutha izozuza izitsha ezinempilo, ukunciphisa lawa mafutha ngaphezu kwama-80%.
Kuzokongela isikhathi ekhishini: Amafriji ajulile angenye yezinto zikagesi ezishesha kakhulu. Okungukuthi, ngendaba yemizuzu embalwa, sizoba nezitsha ezilungile nezimnandi. Ngakho-ke kuzogwema ukuchitha isikhathi esiningi ekhishini noma ukulawula izikhathi. Kusukela kulokhu, ungenza uhlelo oludingekayo kuye ngokuthi ukudla kanye nesikhathi sokupheka.
Izindleko eziphansi zamandla: Ingenye yalezo zinto ezingeke zisebenzise ukukhanya okuningi. Ngakho kulesi simo singasiqhathanisa nehhavini.
Faka phakathi isibali sikhathi: Ungakhathazeki ngokudla, ngoba ngesibali sikhathi, uzokwaziswa uma sekulungile. Akufanele futhi ukhathazeke ngezinga lokushisa ngoba ngokuvamile banokulawula izinga lokushisa.
Kulula kakhulu ukuzisebenzisa: Kuyiqiniso ukuthi njalo uma sithenga umshini siyesaba ukuthi kuzoba nzima ngathi ukuwusebenzisa, kodwa akunjalo. Banokulawula kwedijithali ukwenza izilungiselelo ezinembile.
Kulula ukuhlanza: Njengoba kuzoba into esiyisebenzisa njalo, sidinga ukuthi kube lula ukuyihlanza futhi injalo. Izingxenye zayo zingasuswa futhi ziwashwe kumshini wokuwasha izitsha. Nakuba uma uthanda ngesandla, uzokwenza ngensipho ethambile nesipontshi.
Valelisa kumaphunga amabi lapho upheka: Enye inzuzo enkulu ukuthi ngeke ube nephunga elibi amahora amaningi ekhishini lakho noma intuthu engavela nezinye izinhlobo zemishini.
Yikuphi okungcono, i-fryer engenawo amafutha noma ngamafutha?
Kuyiqiniso ukuthi kuningi ukungabaza, kodwa sizokuqeda ngokushesha. Ngoba uma sikhuluma ngobubanzi sijwayele noma sijwayele ukuthosa ngamafutha. Kodwa kuzo sinezindleko zamafutha ashiwo ngaphezu kweqiniso lokuthi sizobe sisebenzisa ama-calories amaningi futhi akuyona into impilo yethu ezosibonga ngayo. Ngenxa yalesi sizathu, amafriji angenawo uwoyela anempilo futhi asivumela ukuthi senze izitsha ezingapheli.
Ngakho-ke, kuzo zonke izinzuzo abanazo, sizohlala nabo njalo, kodwa yebo, nakuba imiphumela iphelele, kuyiqiniso ukuthi. ezinye zazo azikutholi lokho kuqeda okucwebezelayo njengawoyela. Iyiphi oyikhethayo?
Yini engenziwa yi-deep fryer ngaphandle kwamafutha
Fry: Ngokunengqondo uma sikhuluma nge-deep fryer, sithemba ukupheka okuthosiwe. Hhayi-ke, kulokhu wayengeke asale. Ungakwazi ukujabulela ama-fries ama-french, kanye nokudla okunesinkwa okufana nama-croquette noma ama-steaks.. Kodwa ukuthi amaqanda athosiwe nawo anendawo kumenyu ye-fryer ejulile ngaphandle kwamafutha. Umphumela ungaphezu kokumangalisa futhi uzowuthanda.
Ithosi: Ngaphandle kokungabaza, ukuphela kokudla ngakunye kuzositshela okuningi mayelana nokunambitheka kwakho futhi sizokuthobela ngokuqinile lokho esikuthandayo. Ngakho-ke, uma uthanda eyodwa kwenza ukudla kucwebe kancane ngaphandle kodwa nge ingaphakathi namanzi futhi bushelelezi, khona-ke ungakwazi futhi ukugembula ngalo msebenzi ku-fryer yakho ngaphandle amafutha. Isibonelo, inyama, isibonelo, izoba enye yezithako ezizokubonga kakhulu.
Bhaka: Kunezikhathi eziningi lapho sibona ukuthi kanjani i-fryer engenawo amafutha iqhathaniswa kancane nehhavini. Lokhu kungenxa yokuthi kubuye kube wumoya ophenduka ngesivinini esikhulu ukusonga ukudla. Ngakho kungenye yezindlela zokupheka ezithandwa kakhulu. Kodwa hhayi kuphela ngezitsha ezithile eziyinhloko, kodwa futhi nokwenza ama-dessert.
Njenge: I-roast ephelele isivele ikhona uma kuziwa ku-fryer engenawo amafutha. Uma ucabanga lungisa uchungechunge lwezitsha ngendlela ye-grill noma i-barbecue, khona-ke kufanele usebenzise lo msebenzi. Ngoba umphumela nawo uyamangaza. Nakuba izitsha zokuqala azihlali nje kuphela enyameni, kodwa ungaphinda ukhethe izinhlanzi noma ngisho namazambane athosiwe.
Cocer: Sesikushilo ukuthi awawadingi amafutha futhi uma sipheka ukudla, akunjalo. Ingenye yezindlela zokupheka ezithandwa kakhulu. Ngoba kumayelana inketho enempilo ngokuphelele futhi yilokho esikuthandayo. Ngaphezu kwalokho, kuphelele ukuzinakekela noma ukwenza amalungiselelo okuqala. Konke ongakucabanga!
➤ Ukubuyekezwa komsebenzisi kwama-Air Fryers
Impela uyafisa ukwazi ukuthi bathini abasebenzisi bezithoshi zomoya oshisayo. Iningi lemibono mihle, nakuba kukhona nalabo abangaqinisekanga.
Abasebenzisi abanganelisekile, ikakhulukazi, bakhononda ngokuthi uma uthosa ngamafutha amancane, ukudla akuhlali kufana nokudla okuvamile okuthosiwe. Lokhu kunengqondo, kodwa kufanele ukukhumbule.
Ungafunda ezinye ze amazwana avela kubathengi abaqinisekisiwe abajabule, noma ukuhlolwa okwenzile odlayo:
“Ngithanda ukuthi iyawahluza amafutha iwagcine kungangeni moya kuze kube ngokuzayo. Ukushisa kubonakala kushelela futhi kuyashesha. Ngizamile izindlela zokupheka ezahlukahlukene futhi imiphumela ibilokhu imihle. Konke ku-crispy futhi kunsundu kahle futhi uwoyela osetshenzisiwe awubonakali udlulele. "
“Angikaze ngibe ne-deep fryer ngaphambilini futhi benginokungabaza ukuthi izosebenza kahle kangakanani, noma izongcola kangakanani. Yinhle lento! Ngenze amaphiko ngayo. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi kulula kangakanani ukugcina nokusebenzisa kabusha uwoyela. Uhlelo alunakho ukungcola ngokuphelele. Ukuhlanza kulula kakhulu njengoba ubhasikidi we-fryer, indishi nangaphezulu kulula ukukususa nokuwasha. "
“Le nto yokuthosa izoxazulula noma iyiphi inkinga onayo ngokuthosa. Ukuthosa kuzondwa ngenxa yephunga nokungcola. Lesi fryer esijulile kulula ukusihlanza njengoba sisisebenzisa futhi sifakwe kumshini wokuwasha izitsha. Okuwukuphela kwengxenye engakwazi ukungena kumshini wokuwasha izitsha yingxenye ye-heater, ehlanzwa kalula ku-sink. Ukuhlunga uwoyela kusebenza kahle futhi akudali ukungcola, ngifake ukudla okufriziwe kusuka efrijini, amazambane, inkukhu, njll.
"Kuhle kakhulu! Kudinga ulwazi oluncane ukulungisa isikhathi sokuthosa kahle.
Ayisebenzi ngokuphelele ngaphandle kukawoyela, kodwa ingcono kunezithosa ezijulile zempilo ende.
Ngifisa sengathi bekunezinketho eziningi zokusetha amazinga okushisa ahlukene. I-Digital ibizoba ngcono, kodwa bekuyisipho esimangalisayo esivela kusoka lami, ngakho-ke angikwazi ukukhononda. "
▷ Iziphetho Mifreidorasinaoite
Ngokombono wethu kuyindlela enhle kulabo abafuna ukunciphisa amafutha ekudleni kwakho ngaphandle kokuyeka "okuthosiwe" ngokuphelele. Kungase futhi kube umshini omuhle wasekhaya kulabo abathanda ukupheka kuhhavini, kodwa ngenzuzo ukuthi ikhululekile futhi kulula ukuyihlanza.
Uma uyithenga ucabanga ukuthi uzothoswa ngokufana namamodeli ajwayelekile izokudumazaUma kungenjalo uzojabula ngokuthenga, njengabasebenzisi abaningi.
Uma ungaqiniseki ngemiphumela yokuthi ukupheka ngomoya oshisayo kunikezwa futhi ujwayele ukuthosa kakhulu, bheka I-Water Fryer Movilfrit.
➤ Amanani AmaFryer Amahhala
I-COSORI Fryer ngaphandle ... Bona izici 79.856Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
4,5L I-Oil Free Fryer ... Bona izici 158Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-Aigostar Cube - Fryer... Bona izici 2.550Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-Cecotec Fryer ngaphandle ... Bona izici 262Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-COSORI Fryer ngaphandle ... Bona izici 11.075Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-COSORI Fryer ngaphandle ... Bona izici 14.504Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
Okuhle kakhulu	I-COSORI Fryer ngaphandle ...
Ikhwalithi yamanani	4,5L I-Oil Free Fryer ...
Intandokazi yethu	I-Aigostar Cube - Fryer...
79.856Izibuyekezo ezingu- XNUMX
158Izibuyekezo ezingu- XNUMX
2.550Izibuyekezo ezingu- XNUMX
262Izibuyekezo ezingu- XNUMX
11.075Izibuyekezo ezingu- XNUMX
14.504Izibuyekezo ezingu- XNUMX
Amanani ama-Low Oil Air Fryers ajwayelekile ophakeme kunomdabu. Noma kunjalo, izinhlobonhlobo zamanani zinhle, futhi singathola amamodeli athengekayo azungeze ama-euro angama-50, ngisho ahlome kakhulu angaba ngama-euro angama-250.
Nakuba i-RRP iphezulu kwamanye amamodeli, phakathi nonyaka kuvame ukuba nezipesheli ezimbalwa ezinezaphulelo ezinhle kuzo zonke izinhlobo. Ungabona okunikezwayo okuhle kakhulu manje ngokuchofoza inkinobho.
I-Black Friday Oil Free Fryers
▷ Yiziphi abathengisi abahamba phambili?
Uhlu lubuyekezwa ngokuzenzakalelayo njalo ngamahora angama-24 nabathengisi be-amazon spain
4,5L I-Oil Free Fryer ...
I-Aigostar Cube - Fryer...
▷ Ungasithenga kuphi i-diet fryer?
Ungathenga i-fryer yakho enempilo ezitolo ezibonakalayo noma ezitolo ze-intanethi, lapho uzothola khona ukuhlukahluka okuningi. Yiqiniso, uzothola kuphela i-silvercrest ku-lidl, futhi ayitholakali njalo.
Ukuthenga ku-inthanethi sincoma ngokucacile i-Amazon, esenze sathembela thina kanye nabathengi abaningi eminyakeni yamuva. Impela uyasazi isiqhwaga se-e-commerce, kodwa uma kungenjalo, sizokutshela izizathu zokuthi kungani kungenye yezinketho ezinhle kakhulu:
Izinhlobonhlobo ezinkulu zemikhiqizo namamodeli
Izintengo ezinhle nezipesheli eziqhubekayo
Ukuthunyelwa okusheshayo nokushibhile
Iwaranti esemthethweni yeminyaka emibili
Imibono yabanye abathengi
Kodwa kunezindawo eziningi zokuthenga i-fryer eshibhile engenawoyela:
Amazon: Njengoba sazi kahle, isikhondlakhondla sokuthengisa esiku-inthanethi sinazo zonke izinhlobo zezithosa ezingenawo uwoyela. Ngakho singathola amamodeli ahlukene, izici kanye nakho konke okudingayo ngezidingo zakho zansuku zonke. Ngakho-ke, phakathi kwezinhlobonhlobo eziningi kangaka, kuyiqiniso ukuthi amanani angahluka, okukongela ingcosana enhle ekuthengeni kwakho.
Inkantolo YamaNgisi: Amabhrendi amakhulu nawo ahlangana e-El Corte Inglés. Ngakho-ke sizothola amamodeli ayisisekelo kakhulu, kodwa futhi athengiswa kakhulu ngezikhathi ezithile ngokuya ngosayizi noma izindaba. Ngokuqondene namanani, ungathola futhi isaphulelo kunomunye, kuye ngamamodeli.
ILidl: The Isitolo esikhulu se-Lidl Kuyasimangalisa kuzo zonke izinyathelo. Ngoba umshini ofana nalona nawo uyavela kukhathalogi yabo ngezikhathi ezithile. I-air fryer esisondezayo inakho konke esikudingayo ukuze sithathwe yikho. Ishibhile ngempela futhi kulula ukuyisebenzisa. Kodwa akuyona yodwa imodeli yayo kodwa iphinde yethula enye imodeli yomoya oshisayo, enezinketho ezingu-9 ku-1. Izinketho ezimbili eziphelele zokukwazi ukuzilungisa ezidingweni zethu.
empambana: Kulokhu, izinketho ezingcono kakhulu yizo futhi ozozithola. I-fryer engenawo uwoyela ingenye yezinto zikagesi ezithengiswa kakhulu kuwebhusayithi yayo futhi ngaphezu kwalokho, ungakwazi futhi ukujabulela izaphulelo kumikhiqizo eyaziwayo. Ukusuka kumamodeli ahlangene kuya kwamanye anobubanzi behhavini. Amanani azohluka kuwo wonke kodwa usazothola izinketho ezithengekayo.
I-Cecotec: Uhlobo lwe-Cecotec lukhule kancane kancane. I-niche yenziwe phakathi kweziceliwe kakhulu, ngenxa yemikhiqizo yabo inobuchwepheshe obuphumelele kakhulu. Ngakho-ke, endabeni yokuthosa ngaphandle kwamafutha ayengeke asale. Vele ungene kuwebhusayithi yayo ungabona yonke into ekunikeza yona, ekukhethweni okubanzi kwemikhiqizo hhayi kuphela ekhishinia, kodwa okwekhaya jikelele futhi ngisho nokunakekelwa kwakho siqu. Kodwa kusekuningi, ngoba ikunikeza nokukhethwa kwezindlela zokupheka. Yini enye esingayicela?
Ephakathi: I-Mediamarkt futhi ikunikeza imodeli ewusizo kakhulu. Ngaphezu kwakho konke, kusekelwe emikhiqizo eyaziwa kakhulu futhi ene- inani elihle lemali. Ungakhetha imodeli eyisisekelo kakhulu noma enomsebenzi wayo kahhavini. Kokubili kuthuthukisa ukupheka kwakho okunempilo futhi kukusize nsuku zonke.
Chofoza ukuze ukale lokhu okufakiwe!
(Amavoti: 7 Isilinganiso: 3.3)
Ufuna isithombo esishibhile esingenawoyela? Sitshele ukuthi ufuna ukusebenzisa malini
⭐ I-Oil Free Fryer
Amazwana angama-81 ku-"Fryer without Oil: Imibono nokuthi Iyiphi Ongayithenga"
Ibhodwe lami linenkinga uma kudlula umzuzu linginika u-E1 ngabe kusho ukuthini lokhu
Sawubona. Ngiyaxolisa ukukutshela ukuthi ngaphandle kokwazi imodeli akunakwenzeka. Ngokuvamile u-E1 usho iphutha elilodwa futhi ucaciswe kumanuwali esigabeni samaphutha avamile. Inhlanhla
Ngiyawathanda amafrimu aseFrance, ubhekeni, inkukhu nemifino ethosiwe, kodwa ngenxa yezizathu zempilo, gwema amafutha amaningi, ngakho-ke, inketho ye-fryer engenawo uwoyela, ewusizo, ewusizo futhi ehlukile yansuku zonke yokupheka ekhaya.
Ngaphezu kwalokho, kulula ukuhlanza nokugcina isikhathi, sipheka inkambo yokuqala ku-vitro kanye nekhosi yesibili ku-fryer emoyeni.
Yini ezwakala kahle? Awu, kungcono wazi.
Kuzwakala kumnandi futhi kunambitheka kangcono, haha. Siyabonga ngokubamba iqhaza. Sanibonani
Nami ngiyawathanda, kodwa ukudla kwami ​​kuyangivimbela, futhi angikaze ngidle ukudla okuthosiwe isikhathi esingaphezu konyaka ongu-1. ???? Noma yiziphi iziphakamiso ze-fryer engenawo uwoyela? Ngiyabonga
Sawubona Ana. Unezinketho eziningi ongakhetha kuzo kuwebhu. Uma isabelomali sisihle sincoma i-Tefal futhi uma iyinkosazana eqinile noma i-moulinex ekhabetheni kanye ne-cecotec enokugwedla okunyakazayo nezinye izici. Sanibonani
I-Tefal noma i-COSORI?
I-Cosori inemikhiqizo emihle futhi iyindlela engcono uma ukhetha amamodeli wamakhabethe. Inkinga ukuthi okwamanje akukho Sat eSpain. Inketho enhle futhi i-Tristar, engeyeqembu elifanayo neNkosazana, evela eNetherlands. Sanibonani
Ukudla engikuthanda kakhulu engizokwenza ngama-deep fryer ingwane
Isitsha esithosiwe engisithanda kakhulu ama-French fries.
Isitsha engisithanda kakhulu sokuthosa ama-croquette.
Isidlo engisithanda kakhulu amasongo ka-anyanisi nezinti ze-hake. Oh kanye nama-nuggets enkukhu.
Ngingathanda ukuba ne-fryer ejulile kangaka ukuze upheke impilo enempilo futhi elula.
Isitsha engisithanda kakhulu esithosiwe ama-cod fritters
Izinti zenkukhu ezifakwe izinongo. Nezithelo ezomisiwe. Ngifunde i-air fryer engaba nalowo msebenzi
Ngingathanda ukupheka inkukhu enempilo nama-chips!
Okuthosiwe engikuthandayo yimifino e-tempura.
Isidlo engisithanda kakhulu e-fryer inkukhu ikakhulukazi amaphiko.
Amanye ama-chopitos noma ama-lace athile.
Ngeke ngikhathale ukudla ama-tequeño amnandi afakwe ushizi (ajwayelekile eVenezuela futhi athosiwe), uma ngiwina i-fryer ngiyakumema ukuthi uzowadla ekhaya.
Haha, lokho kungathathwa njengokufumbathisa. inhlanhla
Sawubona!! Isitsha engisithandayo esithosiwe: amazambane, upelepele we-padrón, ama-anchovies, izigubhu zenkukhu, amaphiko enkukhu… .. Ngiyazithanda ezithosiwe!
Isidlo engisithanda kakhulu ama-French fries
Isidlo engisithanda kakhulu ngamaphiko enkukhu ethosiwe.
Izigubhu zenkukhu zimnandi.
Engikuthanda kakhulu amabele osiwe, namazambane athosiwe ngaphandle kokucwiliswa kakhulu emafutheni.
Yeka ukuthi amnandi kangakanani amafrimu nama-croquettes futhi uma ngaphezulu enziwe ngaphandle kwamafutha, acebile.
Kunzima ukukhetha okuthosiwe okuyintandokazi, kodwa ngiyawathanda amaphiko enkukhu anoshukela futhi anamanzi ngaphakathi. Ahhhhhhmmmmmm
Amanye amazambane athosiwe namaqanda kanye ne-ham, namaqanda ne-chorizo, namaqanda nophudingi omnyama; ake sithathe amazambanessssssssssss… ..pleasure !!!!
Ama-croquettes ayikilasi lokuqala, amnandi !!!
Ngiyawathanda amaphiko enkukhu ethosiwe angenawo uwoyela namanye athosiwe. Kumnandi !!! Inkukhu enemifino, ama-croquettes, njll nayo inhle kakhulu. Ake sibone ukuthi ikhona yini inhlanhla futhi ngithole i-draw, eyami ayihambi kahle futhi ngolunye lwalezi zinsuku iyayeka ukusebenza.
Hhayi-ke, inhlanhla. Sanibonani
Isitsha engisithanda kakhulu esithosiwe amazambane athosiwe namaqanda.
Nokho, kimina i-silver crest fryer iwukunethezeka ngentengo enhle
Umngane wami unayo futhi ngiyithandile
Imodeli yakamuva iphelele kakhulu, inkinga ukutholakala njengoba ithengisa ngokushesha. Kuwebhu sinezinye izindlela ezinhle ngokulinganayo noma ezingcono, futhi imodeli efanayo ncamashi. Inhlanhla ngokuthenga.
Isidlo engisithanda kakhulu… Izimbambo ze-BBQ nama-quesadillas?
Kumnandi kakhulu kepha akuthosiwe, haha. Inhlanhla
Sawubona, ngiyawathanda ama-ham namaqanda amaqanda, yum yum
I-Milanesas enopelepele othosiwe namazambane iyisitsha sami esithosiwe engisithanda kakhulu.
I-omelette yamazambane enenkukhu ethosiwe, imnandi! Futhi ikakhulukazi ehlobo ukuthatha epikinikini.
Sanibonani nonke. Isitsha engisithanda kakhulu ama-skewers. Kulesi simo, ngiyaqiniseka ukuthi ngithanda i-zucchini ne-aubergine ngoba ziyimikhiqizo emibili mina nomkami esiyidla njalo.
Ngithenge i-fryer namhlanje ekuseni, ngivuka ekuseni ngishaya umugqa. Uma uhamba ngemva kwehora, akusekho ngisho nelilodwa...
Ukubingelela okuhle. URobert
Isidlo engisithanda kakhulu i- longaniza enopelepele nama-French fries.
isidlo engisithandayo ngaphandle kokungabaza… ama-fries ama-french….
i-saumoni engiyithandayo enamazambane athosiwe
Ukudla engikuthandayo okuthosiwe amaqanda, i-chorizo ​​​​ kanye nama-French fries. Nakuba akufanele idliwe njalo. ?
Sivame ukudla inkukhu egayiwe ngeresiphi ye-"Pilopi" kanye nama-potato wedges. Izingane ziyahlanya ngazo ... Kodwa mina nomyeni wami kufanele sidle kancane amafutha e-XDD Futhi besisanda kucabanga ukuthenga isitofu sikawoyela isikhashana kodwa asikaqiniseki ukuthi sisebenza kanjani ...
Isitsha engisithanda kakhulu ama-aubergines athosiwe.
Ngijabule, manje ngizonika umama eyodwa, iresiphi engiyithanda kakhulu inkukhu ende efakwe ngokuthanda kwami, kanye nekhekhe lesipontshi likalamula.
Isidlo sami esiyintandokazi ama-croquette, noma ngabe ayini. Bayangilahla...
Nginamabili, idrowa kanye nendingilizi eyodwa evela eTefal futhi ngijabule kakhulu ngakho kokubili futhi ngifuna elinye lekhaya lami lesibili
Isitsha esithosiwe engisithanda kakhulu i-calamari a la Romana.
Ama-Nuggets Enkukhu Yezitsha Engizithandayo
Isidlo engisithanda kakhulu ama-French fries anopelepele.
Yebo futhi ngaphandle kokungabaza ... ama-croquettes.
Ama-Croquette nezinti zezinhlanzi ziphuma kahle. Ugwema amafutha. Futhi amabhisikidi nawo aphuma kahle kakhulu. Kodwa isono ukuthatha kancane.
Izitsha engizikhonzile inkukhu kagalikhi, amafrimu nama-aubergines.
Isidlo engisithanda kakhulu inkukhu ethosiwe kakhulu
Iresiphi engiyithandayo ilula kakhulu: ama-French fries !!
U-MONICA PASCUAL UYIJABULELE
Isidlo sami engisithandayo ngaphandle kokungabaza inkukhu, simnandi !!
isidlo engisithanda kakhulu amacroquette enziwa ugogo
Ngingathanda ukuzama ama-prawn nge-gabardine, ingwane i-la romana, ama-anchovies afakwe emanzini, kanye…. Kungaba intokozo ukukwazi ukuzidla ngingacabangi ukuthi zizongikhuluphalisa?
Isitsha esithosiwe engisithanda kakhulu izimpiko zenkukhu ezithosiwe.
Engithanda ukukwenza kakhulu ngamaphiko enkukhu anopelepele othosiwe, amnandi !!!
Sawubona, Isidlo sami engisithanda kakhulu ama-chicken mules.
I-NUGGET WITH FRIES FRENCH, ukudla okuyintandokazi kodeveli bami ababili abancane
UBlanca Esther Díaz Munoz
Ama-french athosa ngaphandle kwamafutha, amnandi kangakanani futhi ayakhuluphala kangakanani !!!!!
Isidlo sami esiyintandokazi:
Inkukhu yesinkwa kanye nama-fries ama-french.
Iresiphi engiyithanda kakhulu imifino e-crispy, ukudla okulula kwe-chickpea omisiwe futhi, yiqiniso, ama-bacon cheese athosiwe AYI-DIVINE.
Okuthosiwe engikuthanda kakhulu amazambane; kodwa amazambane angenawo amafutha kodwa ama-crunchis!
Isidlo sami esiyintandokazi ama-French fries namaphiko, ngifisa sengathi ngabe
Ngiyawathanda amazambane namacroquette
Isitsha sami esiyintandokazi amasoseji athosiwe asikiwe acwebile futhi awanamafutha
Izitsha zami ziyimifino engenawo amafutha kanye nama-sea bass abhakiwe
Ukudla engikuthandayo akungabazeki ukuthi konke ukudla okungenamsoco, ngenxa ye-fryer engenawo uwoyela ungadla lokho kudla ngendlela enempilo.
Isitsha engisithandayo asikho impela kodwa yilokho okutholayo, ama-French fries, haha. Bona ukuthi ngingawenza mahhala yini esitokisini esingenawo uwoyela. Sanibonani
Isidlo sami engisithandayo, inkukhu ku-curry sauce, namazambane no-anyanisi.
Ngiyawathanda ama-nuggets enziwe ekhaya.
Isihloko esihle kakhulu, ngiyabonga ngosizo !!
I-Black Friday Oil Free Deep Fryers
Amafriji angenawo uwoyela e-Cyber ​​​​Monday
I-Copyright 2022 Shipping 24h - Isiqinisekiso esisemthethweni - Ukukhokha okulula